War culus: Ancelotti Oo Iska Casilaya Real Madrid
HomeWararka MaantaWar culus: Ancelotti Oo Iska Casilaya Real Madrid
Tababaraha kooxda Real Madrid, Carlo Ancelotti ayaa la sheegay in uu doonayo in uu iska casilo shaqada tababarenimo ee kooxda Real Madrid kadib cmarkii ay kooxdiisu awoodi kari weyday in ay u shaqayso sidii uu doonayey tababarahaasi.
Khabiirka ciyaaraha ee ku xeel-dheer kubadda cagta wadanka Spain, Guillem Balague ayaa saadaaliyey in uu Carlo Ancelotti aad u doonayo in uu isaga tago kooxdaas kadib markii ay shaqayn waayeen qaab ciyaareedkii uu sannadkii hore ka hirgeliyey naadigaas.
Khabiirkan ayaa faalladiisa saadaasha ah waxa ay u qornayd sidan:
“Maamulaha Real Madrid, Carlo Ancelotti awood la’aanta haysata kooxdiisa ee ay u shaqayn la’dahay si wanaagsan ayaa galaafanaysa shaqadii uu ninkan Talyaaniga ahi sannadkii hore ka qabtay kooxda haysata horyaalka Yurub.
Markii ay Real Madrid u dhamaayeen ciyaartooyada sida Luka Modric, Cristiano Ronaldo iyo Sergio Ramos, jidh ahaanna ay caafimaad qabeen ciyaartoodu way habaysnayd, cid kastana waa ay garaaci jireen. Xattaa marka uu ka maqan yahay mid ka mid ah saddexdeeda weeraryahan waxa ay ku ciyaari jireen nidaamka 4-4-2 taas oo ah sidii ay ku ciyaarayeen inta badan 22-kii ciyaarood ee ay guulaha xidhiidhka ah wadeen, sidaas ayaaba kooxda dheelli-tirnaan wanaagsan u ahayd.
Hadda waa ay iska caddahay in aanay si fiican u ciyarin oo ay dhibaato ka haysato khadka dhexe oo ay xattaa garan la’yihiin si ay kubadda yidhaahdaan. Taasi waxa ay ku khasabtay tababaraha in uu u ogolaado in sida ay iyagu doonayaan ay u ciyaaraan, waliba in ay adeegsadaan awooddooda jidheed iyo boos qaadasho, laakiin si koox ah ayaa ay isku diyaarin kari la’yihiin, waliba waa in ay raadiyaan xal ay weerar ku geli karayaan.
Sidaas daraadeed, waa in la habeeyo habka weerarka rogaal celiska kubadda ku dhisan, marka uu caafimaad qabo Isco waxa iyadna u hagaagta in kubadda baasas fiican ay isku dhiibaan, laakiin mushkiladdu waxay tahay in aanay sidaas tababarka ku samayn karin ee kali ciyaar ay yihiin” sidaas ayuu khabiirku ku sheegay warbixintiisa iyo mushkiladda Real Madrid.
Khabiirku waxa uu sheegay in hadda Isco iyo Toni Kroos aanay caafimaad qabin oo ay jiraan dhaawacyo fudud oo ay qabaan, halka labada ciyaartoy ee Asier Illarramendi iyo Lucas Silva ay maamuli kari la’yihiin kubadda, sidoo kale dhaawaca haleelay James Rodriguez iyo Modric, waxa ay ka dhigeen Real Madrid koox aan garanaynin sidii ay u ciyaari lahaydba.
Khabiirku waxa uu xusay in ciyaartii Athletico Bilbao intii lagu jiray nashada uu tababare Ancelotti u sheegay ciyaartooyadiisa in haddii ay u ciyaaraan sidaas ay hadda yihiin aanay kooxdu waxba ku guuleysan doonin.
Taasi waxa ay keentay arrin walaaceeda leh oo ah in uu tababare Ancelotti ka fikirayo in uu ka baxo heshiiskii uu kooxda kula joogay bisha xagaaga soo socda, isla markaana waxa uu khabiirkani sheegay in ay layaab noqon doonto haddii uu Ancelotti sii joogo kooxdaas sannad kale.
“Dhab ahaan, xattaa xili ciyaareedkii hore markii uu dhamaaday waxay ka fikirayeen in ay eryaan, laakiin goolkii barbar dhaca ee Ramos daqiiqaddii 94aad ku barbarreeyey Atletico ciyaartii Faynalka Champions League ayaa arrinta weji kale u yeeshay. Haddiise madaxa Ramos uu cabbir yar uun dhinac kale u leexan lahaa, Ancelotti shaqada waa laga eryi lahaa, haddana taasi maskaxda maamulka kooxda ee sare waa ay ku jirtaa” sidaas ayuu yidhi khabiirku.
Khabiirkan lagu magacaabo Guillem waxa uu intaa raaciyey in xattaa haddii uu Ancelotti ka tago Real ay mushiladdu sii haysan doonto, maadaama khadka dhexe ee kooxdaasi aanay awoodi karaynin in ay gaadhaan weeraryahannadooda, sidoo kalena dhibaato ay haysato weerarka kuwaas oo aan hore u socon karin in ku filan.
Khabiirka oo ka hadalaya hab-ciyaareedka Gareth Bale oo ay kooxdaasi lacag badan ku soo iibsatay, waxa uu yidhi: “Wali Bale kooxda ulama shaqaynayo sidii laga rabay, amaba lug kuma laha dhisidda ciyaarta waxaanu u ciyaarayaa sidii markii uu joogay Ingiriiska ee uu ka fikirayay in uu kubadda haysto, kaligii ayaa isku dayaya in uu wax walba sameeyo.”
Khabiirku waxa kale oo uu mid mid u dul istaagay Ronaldo iyo Benzema, waxaanu yidhi: “Ronaldo kubbad kaliya goolka kumuu laadin afar kulan oo ka mid ah siddeeddii ciyaarood ee u dambeeyey, Karim Benzema-na kalidii waxba ma qaban karo, lamana xidhiidhi karo kooxda inta kale si fiican sidii uu samaynayay 22kii kulan ee xidhiidhka ay u badinayeen.”
“Hadal iyo dhammaan waa nooc ka mid ah masiibada. Waxay lagu xallin karayaa laga soo bilaab aragtida tababare iyo soo laabashada Modric ee kulanka Schalke iyo Ramos oo mar kale Levente la arko ayaa dabcan war wanaagsan u ah kooxda iyadoo ay Ramos iyo Modric siin karaan hoggaamintii ay u baahnaayeen.”
Khabiirka ayaa waxa uu xusay in hadda ay kooxdaasi dareemayso maqnaanshaha Xabi Alonso oo inta garoonka lagu jiro ciyaartoy kasta u sheegi jiray waxa laga rabo, laga bilaabo Ronaldo illaa Bale, qof kasta oo liitta waxa uu xasuusin jiray in uu si adag u ciyaaro, waliba isaga oo qaylinaya ayaa uu la hadli jiray qof kasta.
Guilem waa khabiir ka tirsan Sky Sports, waxa uu si gaar ah u faalleeyaa ciyaaraha kubadda cagta ee Spain.
Zidane Oo Soo Saaray Liiska Ciyaaryahannada Uu U Xushay Kulanka Champions League ee Juventus
Barcelona Oo Si Xarago Leh Uga Badisay Real Sociedad + Sawiro